Qayb Nolosha Anime - Muuqaalka Cradle
Satowa Hozuki - Astaanta Astaanta
Qeexida Slice Of Life Anime waa Anime kaas oo ku yimaada sida sheekooyinka iyo xaaladaha aan caadi ahayn muuqaalkooda hore laakiin macquulka ah nolosha dhabta ah. Waxaa jira tiro badan oo Anime ah oo ku dhaca qaybtan, iyo qaar badan oo aan ku soo bandhignay boggayaga Muuqaalka Cradle. Hoos waxaa ah maqaallo, qoraallo blog ah, warbaahin, qoraal, iyo qoraallo kale oo dhammaantood ku jira baaxadda Slice Of Life.
10ka qaybood ee ugu sareeya ee nolosha anime si aad u daawato Funimation.
10ka qaybood ee ugu sareeya ee nolosha anime ee laga daawado Netflix.